Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitsarana avo: Nandresy tamin’ny fitoriany ireo depiote
Fitsarana avo: Nandresy tamin’ny fitoriany ireo depiote
Efa alim-be vao navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny didy mahakasika ny fitoriana napetrak’ireo Depiote miisa 73 mitaky ny fanovana.
Omaly alina no namoaka ny didiny ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana (Hcc) . Maro amin’ireo andininy ao amin’ilay lalampifidianana nolanian’ny Hvm tamin’ny kolikoly avo lenta no namoahan’ny Hcc didy fa “tsy mifanaraka amin’ny lalampanorenana”. Dia naveriny any amin’ny governemanta izany ka tsy maintsy hitondran’ny Governemanta fanamboarana, vao haverina hodinihan’ny Parlemanta. Hatreto aloha izany dia azo atao ny milaza fa nisy dingam-pandresen’ny vahoaka. Ny momba ny fampitsaharana ny filohampirenena amin’ny asany izany no andrasana amin’ny Hcc indray izao, satria izay no hetahetam-bahoaka faran-tampony.
Ankoatran’ireo dia mbola miandry ny fitoriana hafa mahakasika ny filoham-pirenena.
Mbola sahy hanitsakitsaka sy hampiasa vola ka hamadika ny tsy fahaizana mitantana ve ireo kravaty manga.
Ny tantara no hitsara…
Distrikan’i Beroroha: Endrika fitsaram-bahoaka hafa indray no ataon’ny mponina
Iray amin’ireo distrika 9 mandrafitra ny Faritra Atsimo Andrefana ny distrikan’i Beroroha. Tato anatin’ny taona vitsy, indrindra fa tao anatin’izao fitondran-dRajaonarimampianina izao dia lasa faritra mena amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny distrikan’i Beroroha. Ao anatin’izany ny halatr’omby, ny vonoan’olona amin’ny endriny samihafa, ny hala-botry, sns sns. Saika miaina ao anatin’izay tsy fandriam-pahalemana izay daholo moa ny tanàna rehetra any amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny, amin’izao fotoana. Rehefa hanjakan’ny asan-dahalo matetika ny faritra iray dia mazava ho avy fa tsy maintsy misy ny trangana fitsaram-bahoaka. Efa manerana ny Nosy mantsy izao no tsy matoky ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana intsony ny mponina. Anisan’ireo distrika nahitàna matetika izay fitsaram-bahoaka izay i Beroroha, saingy ankehitriny kosa dia somary nisy fiovàna ny endrika ny fitsaram-bahoaka ataon’ny mponina fa tsy tahaka ny fahita mahazatra any amin’ny faritra hafa. Ny mateti-pitranga hatramin’izay, rehefa misy ny jiolahy na dahalo tratra dia ny fokonolona no mamono azy ireo, ary tsy manaiky mihitsy ny mponina raha tsy tapitra ny ain’ireo olon-dratsy. Tsy tahaka izay intsony anefa ny zava-misy any Beroroha, tato anatin’ny volana vitsy izay. Rehefa misy ny olona voatondro ho nangalatra na namono olona, tsy manao fitsaram-bahoaka intsony ny fokonolona fa ireo olona voakasika tamin’ny halatra sy ny vonoan’olona ihany no miandry kendry tohina ilay voalaza fa nanao ratsy ary manao valifaty. Tsy akitsitsy ary tsy misy indrafo izany valifaty izay fa avy hatrany dia fahafatesana no miandry ireo voalaza fa mpanao ratsy. Marihana fa tao anatin’ny andro vitsy monja izay, fanafihan-dahalo miisa 3 no niseho tao amin’ny distrikan’i Beroroha ary nisy ny tompon’omby maty notifirin’ny dahalo, nandritra ny fanafihana. Raha ny fantatra dia nikàsa ny hamory vahoaka tamin’ny alalan’ny fampisehoana ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana, izay isan’ireo manohana ny fitondrana ankehitriny, saingy najanona indray io famoriam-bahoaka saika natao io noho ireo fanafihan-dahalo intelo nisesy namoizana olona tsy manan-tsiny.